ခွဲရေး၊ တွဲရေး | ကိုသင်ကာ . . . . Ko Thinker
← Magazine Cover for April Issue
Comments for Vol.1, Issue.1, February Existence Magazine →
March 28, 2008 · 11:29 pm
Living Together နေကြတာ ဘီယာသောက်သလိုပဲ လွယ်လွန်းလို့ ကျနော် ထိုင်းရောက်စက အတော်ပဲ အံ့သြမိပါတယ်။ တကယ်မှာ ဒီကိစ္စဟာ ကြီးကျယ်တဲ့ လူမှုပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ပြဿနာ၊ ကိုယ်ကျင့်တရားစံပြဿနာ မျိုးစုံပါပဲ။ မိဘတွေ မသိဘူးလားမေးရင် ဖြေရမှာ ခပ်ခက်ခက်ပဲ။ သိသိနဲ့ မထိန်းချုပ်နိုင်လို့ လွတ်ထားတယ် ပြောရမှာပဲ။ နေ့တိုင်းလိုက်ကြည့်နေနိုင်တာမှ မဟုတ်တာ။ ဖုန်းတော့ ပြောနေကြတာပဲ။ လက်တွေ့ဘာဖြစ်နေလဲ မိဘက သိနိုင်တာမဟုတ်။
အခု သူတို့စီစဉ်ထားတာတော့ ကြာပြီဆိုတဲ့ ဆိုနင်းဥပဒေကို အသက်သွင်းလာရတာ ဒီပြဿနာကြီးကြောင့်ပါ။ ဒါပေမယ့် ကျနော့် အမြင်မှာတော့ ဘာမှ ထိရောက်ဖို့ မမြင်ပါဘူး။ ထိုင်းလူငယ်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်း သိပ်မကြာခင် လျော့လျဲလျဲဖြစ်မယ့်ဥပဒေလို့ သဘောထားတာတွေ့ရပါတယ်။
သေးတဲ့ အဆောင်တွေက ယောင်္ကျားဆောင်လုပ်မလား၊ မိန်းမဆောင်လုပ်မလား ရွေးရတယ်။ ကြီးတဲ့အဆောင်တွေက ဒီဘက်က ယောင်္ကျားခြမ်း၊ ဟိုဘက်က မိန်းမခြမ်းဆိုပြီးခွဲတယ်။ တကယ်တော့ ရယ်စရာကြီးပါ။ ဘာမှလည်း အတားအဆီးရှိတာမဟုတ်။ ဒီဘက်အခန်းက ကောင်လေးက ဟိုဘက်အခန်းက ကောင်မလေးဆီ ညကျရင်ကူးသွားရုံပဲ။ တစ်ဆောင်တည်းမှာ ယောင်္ကျားလေးနှစ်ယောက်က တစ်ခန်းယူမယ်ဆိုပြီး စာရင်းသွင်း၊ မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကလည်း ထို့အတူ စာရင်းသွင်း၊ ပြီးတော့ Exchange လုပ်ပြီးပြောင်းနေရုံပဲလေ။ ပစ္စည်းပစ္စယ ထားသိုရတာ ကရိကထများတာတစ်ခုပဲ။ တကယ်လို့ အဆောင်မှာ ယောင်္ကျား၊ မိန်းမ အတူနေတယ်လို့ တာဝန်ရှိသူတွေက မိရင် ကာယကံရှင်ရော၊ အဆောင်ပိုင်ရှင်ပါ ဒဏ်ရိုက်ခံရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီလိုလုပ်ရုံနဲ့ ဒီလူမှုပြဿနာတွေကို ရှင်းနေပါပြီလို့ လုပ်ပြနေတာဟာ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ လျော့လျဲမှု၊ အပေါ်ရံဘန်းပြတွေနဲ့ ဖြေသိမ့်မှုတွေကို ပြနေတာပါပဲ။ နှိမ်ပြောတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဖွံ့ဖြိုးမှုရဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့စာမျက်နှာ တစ်ဖက်လို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီဆိုနင်းကြီး ဘယ်လောက်များထိရောက်မလဲဆိုတာတော့ ကြည့်ချင်သေးတယ်။ လောလောဆယ် မစ္စတာသင်ကာနေတဲ့ အဆောင်အခြမ်းဘက်ကို မိန်းကလေးခြမ်း သတ်မှတ်လိုက်လို့ ကျနော်ရော၊ ကိုဇော်တူးကြီးရော အခန်းပြောင်း အလုပ်ရှုပ်ချိမ့်ဦးမယ်။ ခုတော့ မဟုတ်သေးဘူး။ သင်္ကြန်ပြီးလောက်ပေါ့။
13 responses to “ခွဲရေး၊ တွဲရေး”
အဆောင်ပဲပြောင်းပါ ဗျာ … ဟိုဟာတော့ မပြောင်းပါနဲ့ 🙂
ကိုသင်ကာကြီး ကို အရောက်ပို့ပေးနေကြပါလားဗျ. 😀 ဟက်ဟက်. ကိုသင့်ရေ. သတိသာထားတော့ဗျို့။